Omahosha bacela isibonelelo kuhulumeni - Ilanga News
Home Izindaba Omahosha bacela isibonelelo kuhulumeni
Babalisa ngendlala ezobabhuqa begonqe izinsuku eziwu-21
OMAHOSHA babalisa ngokushiywa ngaphandle emalini yesibonelelo sikahulumeni ezotholwa ngosomabhizinisi abancane.
OMAHOSHA babalisa ngokushiywa ngaphandle emalini yesibonelelo sikahulumeni ezotholwa ngosomabhizinisi abancane kulesi sikhathi sezinsuku eziwu-21 kume nse yonke into ezweni.
Kumanje izisebenzi zigonqe emakhaya ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka ngamandla kuka-somqhele (coronavirus) kuleli, ngokomyalelo kahulumeni.
Nokho kugonqwe nje, omahosha basale dengwane njengoba bengazi ukuthi ikati bazolixosha ngani eziko.
Kuzokhumbuleka ukuthi uMengameli Cyril Ramaphosa umemezele ngokuqala kwesonto eledlule ukuthi kuzovalwa thaqa izwe ngoLwesine (esiphuma kulo) ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwaleli gciwane.
ILANGA libe nengxoxo ekhethe-kile nomunye womahosha ocele ukuba ligodlwe igama lakhe ukumvikela emndenini wakhe njengoba ungazi ukuthi wenza lo msebe-nzi, obalise kanzima ngesimo sabo.
Uthi njengoba besebenza ukuye-nga amadoda emgwaqeni nje, nabo bathathe isinqumo sokuhlonipha umengameli ngokuvala ukusebenza.
Uthi umsebenzi wabo ubabeka engcupheni enkulu yokutheleleka kalula ngenxa yokuthi uyabaphoqa ukuxhumana ngqo namakhasimende ahlukene abasebenza ngawo.
“Kumanje ngihleli ekhaya, wonke amakilayenti ami ngiwatshelile ukuthi kangisebenzi. Sihlonipha umthetho okhishwe ngumengameli wezwe wokuthi kume yonke into.
“Besifisa ukuba uhulumeni asizwele nathi singabadayisi bocansi kulo msebenzi wethu esiwenzayo, siyithole imali yesibonelelo le ezotholwa ngosomabhizinisi abancane.
“Phela nathi lokhu esikwenzayo kuyibhizinisi lethu, esondla ngalo imindeni yethu. Sikhulisa ngalo izingane zethu, ngaphandle kwalo ngeke siphile.
“Okunye ngalo msebenzi wukuthi siyafisa ukuba uhulumeni ayithathele phezulu indaba yabadayisi bocansi ngoba kukhombisa ngokusobala ukuthi umsebenzi esiwenzayo ubaluleke kangakanani emhlabeni njengoba sinenqwaba yamakilayenti.
“Kumanje amakilayenti ethu ayakhala njengoba sivalile, singatholakali,” esho.
Omunye esikhulume naye uveze ukuthi ujika nelanga ngenxa yokuthi amahhotela abasebenzela kuwona avaliwe, amakilayenti abo ngeke akwazi ukubathola.
“Kunzima, kasazi nokuthi sizo-yondla ngani imindeni yethu kulesi sikhathi esizobe sihleli ngaso emakhaya.
“Phela sesijwayele ukuthi imali siyenza zonke izinsuku, manje konke lokho kuzoshintsha njengoba kuzophela amasonto amathathu wonke sihleli emakhaya singasebenzi, singatholi mali,” esho nge-zwi elinosizi.
ILANGA likhulume noNkz Nokwanda Gambushe, okhulumela iSWEAT and Sisonke, okuyinhlangano yamalungelo abantu abadayisa ngocansi, othe: “Siyinhlangano yabantu abadayisa ngocansi besifisa ukuba uhulumeni asizwele nathi kulo msebenzi, kube khona akunika abadayisi kulezi zinsuku eziwu-21 kungasetshenzwa.
“Umsebenzi owenziwa ngabadayisi bocansi uyasiza njengoba bondla imindeni yabo, kuzoba nzima ukuthi bakwazi ukondla imindeni yabo behleli emakhaya.
“Okunye esisakulwela wukuthi uhulumeni awuthathe njengomsebenzi obalulekile umsebenzi wokudayisa ngocansi, abantu bayeke ukuwubukela phansi.”
Previous articleiSimanga engcwatshwa ehleli emotweni
Next articleKuboshwe ovalele izisebenzi efemini